Akụkọ Ngwaahịa |
Valvụ nru ububa dị mma maka pipeline na-ebufe usoro mgbasa ozi dị iche iche na-emebi emebi na nke na-anaghị emebi emebi na sistemụ injinịa dị ka igwe na-emepụta ọkụ, gas kol, gas sitere n'okike, ikuku oyi na ikuku na-ekpo ọkụ, nzere kemịkalụ na ike ọkụ na nchekwa gburugburu ebe obibi, a na-ejikwa ya maka nhazi na mgbachi. ..
Kedu ihe ị ga -eme mgbe valvụ ahụ na -awụpụ, gịnịkwa bụ isi ihe kpatara ya?
Nke mbụ, mpempe mmechi ahụ dara wee na -agbapụta mmiri Ihe kpatara ya: 1. Ịrụ ọrụ na -adịghị mma na -eme ka akụkụ mmechi ahụ rapara ma ọ bụ karịa n'etiti etiti nwụrụ anwụ, njikọ ahụ mebiri ma gbajie; 2. Akụkụ mmechi ahụ ejikọtaghị nke ọma, tọpụrụ ma daa; 3. Ihe nke akụkụ njikọ ...
Kedu ihe dị iche n'etiti valvụ ụwa na valvụ ọnụ ụzọ ámá?
Globe valves, valvụ ọnụ ụzọ ámá, valvụ urukurubụba, valvụ nlele na valvụ bọọlụ, wdg. Valvụ ndị a bụzi ihe njikwa dị mkpa na sistemụ ọkpọkọ dị iche iche. Ụdị valvụ ọ bụla dị iche n'ọdịdị, nhazi yana ebumnuche arụ ọrụ. Agbanyeghị, valvụ nkwụsị na valvụ ọnụ ụzọ nwere ya ...
Valve Gate Valve, Igwe anaghị agba nchara bọl valvụ, Ogwe bọọlụ Trunnion, Akuku Globe Valve, Igwe anaghị agba nchara Gate Gate valvụ, Valve Gate Gate,